Amaphuzu Amibili Okwazi Ngayo Imiklamo Yezinsiza Zamavivinywa E-Electronic | I-HVC Capacitor-High Voltage Ceramic Capacitor I-Doorknob Capacitor i-High Voltage Multi Layer Cap Capitor
Amaphuzu amabili Ukuze Oyaziyo Electronic Test Izinsiza kusebenza Projects
ngu Matt Westervelt
Imininingwane oyidingayo mayelana nemiklamo yokuhlola ye-elektroniki ihlanganisa imishini yokuhlola ye-electronic nezinto ezidingekayo ezikhethekile.
Ama-neon ama-nebs ama-probes angaba yi-tester encane kunazo zonke futhi elula kakhulu yokuhlola amandla we-AC atholakala ezitolo. Sondeza eyodwa ku-antenna yokudlulisela noma mhlawumbe ikhebula le-spark plug yemoto, bese ubona izibani ze-neon zikhanya. Abahloli abaningi bokuzenzela banikezwa ngamakhithi; noma kunjalo ungadala eyodwa kusuka ekuqaleni noma kusuka ku-elekthronikhi yakudala etholakala ekhaya lakho. Bheka le ndatshana ukuze uqonde kabanzi ngemishini yokuhlola ye-elekthronikhi uma ngabe uhlela ukuyenza wedwa.
Imishini yokuhlola i-elekthronikhi
Imishini yokuhlola ye-Multimeter emc iyindlela enhle kakhulu yezinto zakho zokuqala zokuhlola. Ama-Schematics namakhithi angatholakala kuma-multimeter edijithali. Ngaphambi kokuqala amathuluzi wokuhlola we-multimeter wakho wokuqala, ungathenga i-multimeter enenani elishibhile. Isikhwama sakho sehembe singavele silingane nale multimeter encane futhi eguquguqukayo kanye nelambu le-neon. Ngenkathi ukwinkqubo yokwenza imitha lakho, ungaqala futhi ukuba nemibono maqondana nenselelo yakho elandelayo yokwenza ngokwakho. Ngemuva nje kokudala imitha lakho, ungagxila kokuphakelwa kwamandla okuguquguqukayo, noma mhlawumbe i-generator yesiginali. Bhala eminye imishini yokuhlola, njengoba uthuthuka nemisebenzi yakho. Ngokwenza lokhu, ngeke ukwazi ukugcina isikhathi sakho kuphela, kepha futhi uzokwazi nokuthi uzofika ekutholeni ukuxilongwa ngokushesha kwezinkinga ozohlangabezana nazo. Ungasebenzisa i-oscilloscope ezolingana kahle ne-generator yesiginali futhi izosebenzisana nayo ukudala ifomathi yamaza kanye nokuhlaziywa kokulinganisa.
Izinto ezibalulekile ezibalulekile
* Imitha yamandla esensimu
Ukuthuthukisa uhlelo lwakho lokuhlola kuzokusiza ukuba uzifake ngokwezidingo zakho ezithile. Imitha yamandla yasensimu iyodingeka ngumqhubi womsakazo wenhlanhla futhi ingasetshenziswa njengemitha yomsakazo we-watt noma imishini yokudlulisela njengomthwalo we-dummy.
* Ukuphindaphinda counter
I-counter counter kuyinto enye into yokuhlola ebalulekile. Ukuvivinya amadivaysi alalelwayo we-hi-fidelity kwandiswe umhlaziyi wezinto eziphambene ezingasetshenziswa yi-millivoltmeter ne-oscilloscope. Ukuba nebhokisi lokuhlola i-loudspeaker kuzokusiza ukuba ubone kalula uhlelo olufanele lwe-impedance ngqo ngokusebenzisa isikhulumi ukuze uqinisekise ukuthi une-crossover esebenza kahle.
* I-Transistor futhi iphinde ihlolwe abahloli
I-Transistor ne-diode tester yilezi zinto ezikhethekile ezidingekayo zokusebenzisa imishini yokuhlola kagesi. Lokhu kubangelwa ukuthi amadivaysi amaningi wokuhlola i-electronic kuphela amathuluzi okubuyisela ama-capacitors nama-resistors. Ngokusebenzisa abahloli, njengabaculi be-transistors kanye nama-diodes, isheke esilula singenziwa kuphela ngezinxenye ezinenkinga ezingenzeka. Ngalolu hlobo lwamathuluzi, akudingeki wenze ukuhlaziywa kokuhlola kwe-voltage noma ukulandelela okuhleliwe ngama-generator yesignali.
* Izinto ezindala zobuchwepheshe
Izinto ze-elektroniki ezindala ongasasisebenzisi ezihlala eduze kwendlu zingase zibe usizo kakhulu kumsebenzi wakho wokuhlola i-home home. Ungakwazi ukuhlambalaza izifunda ezivela kulezi zinto ezindala nezonakalisiwe ze-elektroniki ezifana nezinto zokunikezwa amandla noma ama-stereos amadala. Inhloso lapha ukukwenza, ukulungisa noma ukulungisa izinhlelo zikagesi. Ukuzenzela ngokwakho ku-kit noma ngokwakho kuzokusiza ukuthi ulondoloze imali, futhi unikeze uhlelo olumisiwe oluzokwenza ukuthi ulondoloze isikhathi sokuxazulula inkinga bese uqedela inqubo yokulungisa.
Uma usebenzisa ama-electronics, ngaso sonke isikhathi uthathe izinyathelo zokuqapha ngenxa yokuthi kungenzeka ukuthi u-electrocuted. Kunconywa ukuba wenze ucwaningo olunzulu ngaphambi kokuqala iphrojekthi ye-electronic ye-do-it yourself.
ciroceanint@gmail.com Voltage High resistors Mayelana, Electronic, Isisetshenziswa, Yazi, amaphuzu, Projects, test